Ol-iyyanni Himatamaan Yakka Duguuginsa Sanyii Ruwaandaa Dhiheeffate Fudhatama Dhabe
Manni murtii ol iyyannaa sadarkaa ol aanaa Faransaay, bara 1994 duguuginsa sanyii Rwaandaa maallaqaan deggere nama jedhame tokko Mana Murtii Tokkummaa Tootummootaatti darbarfamee akka hin kennamne ugguruuf iyyannaa itti dhihaate fudhatama dhorkate. Faransaay kan umuriin waggaa 84 Felisheen Kaabugaa Mana murtii Taanzaaniyaatti dabarsee kennuuf yeroo ji’a tokkoo qaba.
Manni-murtii ol iyyannaa Faransaay, kan barbaacha waggoota digdamii shanii tii booda baatii Caamsaa dabre naannoo magaalaa Paarisitti appaartaamaa tokko keessatti qabame Feliishen Kabuugaa irratti murtii raggaasisuun isaaf rifaatuu guddaa dha.
Abukaatonni Kabuugaa, akka inni mana-murtii Tokkummaa Mootummootaa Aruushaa jirutti dhihaatu murtii duraan kenname fudhachuu diduun ol iyyannaa dhiheeffataniin, Kabuugaan dhibee fayyaa ka qabu tahuu isaa fi manni-murtii Tokkummaa Mootummootaa dhimma isaa loogiin ilaaluu mala, jedhanii turan.
Manni-murtii ol iyyannaa garuu, Kabuugaan gara Aruushaatti akka hin dabarfamne kan dhorkuu danda’u sababaa seeraa fi sababaa dhibee fayyaa hin argine, jechuun murtiidhuma duraa raggaasise.
Biyyonni Afrikaa Uffee Sahaaraa Gadii Hedduun Qajeelfama Demokraasii Ka Bu'uraa Irraa Duubatti Sigiigaataa Jiru:Seera Tumtoota Amerikaa
Mootummaan Tramp Lakkoobsa Baqattoota Ameerikaa Seenanii Murtaa’aa Akka Ta’u Fedhuu Isaa Beeksise